I-Pepper | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Uhlu lwezinhlobo ze-pepper eshisayo yokukhula ekhaya
I-pepper enobuthi ngenempumelelo enkulu ingatshalwa hhayi engadini kuphela, kodwa futhi nasekhaya, ezimbizeni. Ngenxa yalokho, uthola isiphuzo esimnandi nesitshalo esihle sokuhlobisa. Namuhla, kunezinhlobonhlobo eziningi zezinhlobo zasendlini ezithengiswayo, kodwa sizocubungula izinhlobo eziningana kakhulu nezinhle kakhulu ze-pepper eshisayo yokulima endaweni efasiteleni.
Kusukela ngoFebruwari, umncintiswano we-pepper uqala: cwilisa imbewu, utshale izithombo bese ubondla njengengane encane, uhlanyele emhlabathini, uvikele emakhazeni, uthole indawo efanelekile, u-pritenit, amanzi, ugeze, uchithe okubi. Futhi manje, ekugcineni, ukuvuna, kodwa ukuthi kuningi kangakanani! Kanjani manje nalokhu ingcebo ukulahla konke okuwusizo okuqukethwe kupelepele, okwanele wonke futhi isikhathi eside?
Iyini i-pepper eluhlaza?
Pepper yaseBulgaria eluhlaza (i-pepper engavuthiwe) isithelo sesitshalo saminyaka yonke esiyi-Solbaceae yomndeni. Isatshalaliswa kabanzi futhi ihlonywe e-Ukraine, eRussia, e-Italy, eRomania, eBulgaria, eGrisi. Namuhla imifino ethandwayo, cishe cishe wonke umuntu owaziyo. Kulesi sihloko sizokhuluma ngenani lokudla okunomsoco nokuqukethwe kwekhalori we-pepper eluhlaza, kanye nezinzuzo zalo kanye nokulimaza umzimba.
I-pepper eluhlaza: izinzuzo nokulimala
Ihlobo liyisikhathi esimangalisayo lapho imifino entsha ivuthiwe, igcwele izinzuzo, ukunambitheka nokugubha kwemibala ehlukahlukene. Okumnandi, ama-pepper enemibala: obomvu, ohlaza okwesibhakabhaka, o-orange, ophuzi ngisho nobomvu bahlukanisa imenyu futhi benze izitsha zibe nenhle, ziwusizo, zibanike ukunambitheka okuqondile nokubukeka komzimba.
Indlela yokukhulisa izithombo ze-pepper yesiBulgaria ku-Urals: amathiphu awusizo kusuka ku-agronomists abanolwazi
Isifunda ngasinye sibhekene nezimo ezithile zezulu ezenzelwe imifino yokuvuthwa. Akukona nje isikhathi esidlule, kwakungeke kwenzeke ukuthi ucabange ukukhula ema-Urals i-pepper ye-thermophilic yaseBulgaria. Kodwa ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe bezolimo kanye nezinhlobo zokuzalanisa, lokhu sekuyiqiniso. Nokho, ukuze uthole isivuno esihle sepelepele, kubalulekile ukuqala ukulungiselela ukutshala kwalo kusukela ebusika.
Indlela yokuqoqa pepper ngesi-Armenia ebusika
Isizwe ngasinye sinokupheka isikhathi sokuhlolwa kwamanothi. Isibonelo, i-pepper eqoshiwe, noma i-paprika. Zonke lezi zokupheka zihluka phakathi kwabo ngokwezilinganiso zemikhiqizo, kanye nezinongo nezinongo. Akukho okunye ukudla kwe-Armenia, izitsha zazo ezihlukaniswa yi-spiciness kanye nokunambitheka okunamnandi.
Ukwenza i-pepper ebusika ebusika: izindlela zokupheka ezinhle zomndeni wakho
Ama-chillies, okubabayo noma okubabayo - konke okuphathelene nemifino efanayo, mayelana ne-pepper. Kuhle kokubili ukudla okunomsoco futhi njengesidlo esihlukile. Futhi kuyasiza, ngakho awukwazi ukwesaba ukuzithoba ngokweqile. Iyini imifino emihle nokuthi yini engcono ukupheka nayo - thola okulandelayo. Ngokufushane mayelana nezinzuzo ze-pepper eshisayo Umkhiqizo ubukhali ukunambitheka ngenxa yobukhona be-capsaicin ku-alkaloid.
Pepper isiBulgaria ebusika: kanjani ukukhipha imifino
I-pepper yaseBulgaria elungiselelwe kahle ngeke ihlobise noma yikuphi itafula, kodwa futhi kufanele ithathe indawo yokuhlonishwa kwesigamu esiphundu kunazo zonke. Abapheki bakhe abaningi babheka izinto ezivundile zokwakha izitsha zokudla. Ngakho ake sibone ukuthi singayilungisa kanjani lemifino ebusika, ukuze sithole ngokushesha futhi sinambitheke.
Indlela yokuqoqa ipulazi elimnandi laseBulgaria ebusika: isinyathelo ngesinyathelo zokupheka ngezithombe
I-pepper yesiBulgaria ifakwe ohlwini lwemifino ewusizo kakhulu ngenxa yemali enkulu ye-ascorbic acid ekubunjweni. Lemifino enomsoco ihambisana nokusetshenziswa okuhlukahlukeneyo: idliwa esisha, isobho, ifakwe, ivunwa ebusika. Sizokhuluma ngeyodwa yezindlela zokugaya imifino yasebusika, okuyi-pickling, namhlanje.
Indlela yokuvala i-pepper yokugxila ebusika: zokupheka ngezithombe
Pepper eqoshiwe ekheniwe ingenye yezitsha ezidumile kakhulu nezithandwa ezweni lethu ebusika. Kodwa-ke, akunakwenzeka ukuthola amaphilisi amasha, aphezulu futhi ahlwabusayo ngentengo engabizi ebusika. Kulesi simo, isixazululo esingcono kakhulu sizobe sesivuna amapropele ekugxotsheni kwasebusika. Ukupheka i-twist kulula futhi kuzobe sekuphoqelekile, ngisho noma ungenayo isipiliyoni ngezikhala.
Indlela yokulungisa izipelepele zaseBulgaria ebusika: iresiphi yesinyathelo ngesinyathelo ngezithombe
Ebusika kubusika kakhulu ukuvula imbiza yokulondoloza okuzenzela futhi ujabulele ukunambitheka, okukhumbuza ihlobo. Omunye wemikhiqizo ethandwa kakhulu emalungiselelo ebusika yi-sweet pepper yaseBulgaria, inyama yayo igcina ubukhulu bayo futhi iqoqa ngokujabulisayo. Okuthandwa kakhulu ukuvuna imifino egosiwe ku-marinade, ukulondolozwa okunjalo kugcinwa kahle futhi kunephunga elimnandi nokunambitheka okuthakazelisayo, futhi i-pulp ithenda igcina ijusi layo.
Izinketho zokulondoloza pepper eshisayo ebusika, zokupheka
Uma unesizungu ngamalungiselelo endabuko asebusika amakhokhamba, utamatisi kanye nechocho, siphakamisa ukuthi uzame ukugaya kanye nama-pepper ashisayo. Izinketho zokusetha kwayo. Futhi, ngokungangabazeki, bahlukanisa imenyu yakho ebusika, futhi bayondla ngamavithamini abalulekile. Ngezinye zazo, ezithakazelisayo kakhulu futhi ezihlwabusayo, sizokwazisa kulokhu kulesi sihloko.